Ministirri muummee Israa'el Beeniyaamiin Netaanyaahuu filannoo paartii isaanii mo’atan - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri muummee Israa'el Beeniyaamiin Netaanyaahuu filannoo paartii isaanii mo’atan
Madda suuraa, AFP/EPA
Ministirri muummee filannoo paartii isaanii mo'atan
Har'amoo bor mana hidhaa galu jedhamanii kan yaadaamaa jiran Ministirri Muummee Israa'el Beeniyaamiin Netaanyaahuu filannoo paartii isaanii keessatti gaggeeffamu sagalee baayyee caalmaa qabuun mo'ataniiru.
Mo'achuu filannoo isaanii kanaan ammoo hoji-gageessummaa partii isaanii Liikiwud Paartii jedhamu mirkaneeffataniiru jechuudha.
"Ani kanan mo'adhes garaa garummaa guddaatiin," jedhan Beeniyaamiin Netaanyaahuu erga mo'atanii booda dubbii dubbataniin.
Gaggeessaa Liikiwud Paartii ta'uudhaaf namoota dorgoman Geediyoon Saar kan jedhamanirraa dorgommii cimaatu isaan eeggata jedhamee turullee Ministirri Muummee Israa'el kun garuu mo'achuu danda'eera.
Miseensota paartii isaanii kuma 116 ta'an keessaa kuma 49 kan ta'an sagalee isaanii anaaf kennaniiru jedhan Netaanyaahuun.
Morkataan isaanii Geediyoon ammoo mo'amuukoo amanee fudhadheera jedhan. Kanaan booda Neetinyaahuu cinaan dhaabadha jechuun BBC'tti himaniiru.
Israa'el filannoo morkiin cimaadha jedhame itti mul'ate gaggeessaa jirti
Israa’el Ilhaan Omaariifi Rashiidaa Xalib akka biyya ishii hin seenne dhorkite
Ministira Muummee 'Oromiyaa Xiqqoo' keessatti
Hayyoonni siyaasaa himannaan malaammaltummaa sadii kan irratti dhiyaatee jiru, Netaanyaahuuf injfannoon kun milkaa'ina guddaadha jedhu.
Nama umuriin ganna 70 ta'an Neetinyaahuun himannaa malaammaltummaa irratti baname dura dhaabbachuufi filannoon wantoota ijoo fuulduratti isaan eeggatudha.
Israa'el keessa waggaa tokko keessatti filannoon si'a sadii gaggeeffamullee Netaanyaahus ta'e morkataan isaa Been Gaaz teessuma mootummaa hundeessuu isaan dandeesisu argachuu hin dandeenye ture.
Waliin ta'uudhaan mootummaa hundeessuuf ammoo eenyutu ministira muummee ta'a kan jedhu irratti waliif galuu hin dandeenye.
Filannoo Eblaafi Fulbaana darban gaggeeffameen Liikiwuud Paartiin teessoo 33 erga mo'ateen booda paartii Biluufi waayit waliin mootummaa waloo hundeessuu hin dandeenye.
Bu'aan filannoo Netaaniyaahu gaggeessaa paartii isaanii akka ta'anii itti fufan isaan dandeesisu mo'adhe jedhan kun har'a galgala [Jimaata] ifatti kan himamu yoo ta'u isaan garuu dursanii shakkii hin qabaatiinaa ani injifadheeraa jedhaniiru.
"Gargaarsa Uumaafi gargaarsa keessaniin Liikuwuud Paartii irra deebiin akkan gaggeessuuf filatameera. Filannoo biyyaalessaa dhufuufillee mo'icha guddaaf qophaa'eera. Mo'ichi itti fufa," jechuun fuula Tiwiitara isaaniirratti afaan Ibirootaan barreessaniiru.
Geediyoon gama isaaniitiin filannoo dhufu irratti Neetinyaahuu waliinan dhaabbadha jedhan.
Beeniyaamiin Neetaaniyaahu seenaa Israa'el keessatti gaggeessaa yeroo dheeraaf aangoorra turanidha.
Filannoo Israa'el: MM Netniyaahuun marsaa shanaffaaf dorgomaa jiru
9 Ebla 2019
Dr. Abiy Ahimad: Ministira Muummee Oromiyaa Xiqqoo keessatti
'Mucaa kiyya hospitaalaan ga'uuf guyyoota sadiin miilaan imale'
Yeroo filannoo qaamoleen seera mirgoota namoomaa akka kabajan gaafatame